Akụkọ - Otu obere nwanne na Qingdao yi ụkwụ prosthetic na-agba ọkụ vidiyo na ịntanetị niile! Nke a bụ mmụọ ọgụ!
Na nso nso a,
Na Mee 18th
N'ụlọ akwụkwọ egwuregwu Qingdao
Nwoke nwere ụkwụ prosthetic na ndị ọzọ na-agba ọsọ Ọ bụ Li MAO da
Amụrụ na 1988, Li Maoda bụbu nwoke nwere ike nke na-amasị egwuregwu kemgbe ọ bụ nwata, ọkachasị na-agba ọsọ. N'afọ 2009, a dọkpụrụ ụkwụ aka nri Li n'ime igwekota ụgbọ mmiri ahụ maka awa abụọ na ọkara n'ihi ihe mberede, ọ nweghịkwa ụzọ a ga-esi zọpụta ya. Ọ hụrụ ụkwụ aka nri ya gbajiri agbaji ka e kokwasịrị na gia n'ihu
Mgbe nnapụtachara ụlọ ọgwụ, a zọpụtara ndụ Li MAO, mana ọ tụfuru ụkwụ aka nri ya ruo mgbe ebighị ebi
Li kwuru na n'ebe kacha ala ya, otu nwanne nna nke lekọtara nwunye ya n'ụlọ ọgwụ nyere Ya olileanya ọzọ. “Ọ bụkwa onye e bepụrụ, ma ọ bụghị nanị na ọ pụrụ ilekọta nwunye ya na-arịa ọrịa mgbe ọ yisịrị ụkwụ prosthetic. O nwere ike ime nke ahụ, mụ onwe m nwekwara ike ime ya.” Big Li Mao kwuru
Yiri prosthesis wee bilie ọzọ
Li MAO na-agba ara maka ịga ije ma dị ka onye nkịtị ma e wezụga nkutu
N'ihi ezi ahụ ike ya, onye nwe ụlọ ọrụ na-emepụta ogwe aka prosthetic kpọbatara ya na otu egwuregwu ndị nwere nkwarụ na Beijing, wee malite ịme ịgba n'oche nkwagharị.
Mgbe ahụ, ọ bịara na kọntaktị prosthesis egwuregwu
A sị ka e kwuwe, ọ bụghị ụkwụ nke ya, ọ bụ naanị ya maara ihe mgbu nke ọzụzụ, Li MAO kwuru, sị: "N'ihi na mmegharị nke ibu ụkwụ prosthetic adịghị mma, mgbe ụfọdụ ọ ga-agbaji ọsụsọ okpomọkụ, ọsụsọ tinye akpụkpọ ahụ, ga-agbaji."
Chineke na-akwụ ndị na-arụsi ọrụ ike ụgwọ ọrụ. N'April 2014, Li Mauda meriri MEDALS ọla edo na mmemme mita 100 na mita 200 na National Track and Field Championships for Disables. Na Septemba 2015, ọ meriri ọla edo ọzọ na ihe omume 200-mita nke klas T42, wee dekọba ndekọ mba ọhụrụ.
"Mee akụkụ aka prosthetic dị ka akụkụ nke ahụ gị," Li kwuru. “Echela ya dị ka akụkụ aka prosthetic, enwekwala nrụgide uche. Nkwarụ abụghị isi ihe, nkwarụ uche bụ ezigbo nkwarụ."
Ọ bụ dike agụba a na-akwanyere ùgwù nke na-agba ọsọ iti ihe na-agaghị ekwe omume
Nye ya isi mkpịsị aka elu!
Oge nzipu: Ọgọst-26-2021